🥇 ▷ WhatsApp: Ma arki karo macluumaadka xiriirka, maxaa yeelay? ✅
WhatsApp: Ma arki karo macluumaadka xiriirka, maxaa yeelay?
Fur WhatsApp, mid ka mid ah sheekaysiga oo guji magaca xiriirka. Tan waxaad ku heli kartaa macluumaadka qofkaas waxaadna arki kartaa xogta sida sawirkooda muuqaalka, macluumaadka ku saabsan iyaga, lambarkooda taleefanka ama kooxaha WhatsApp ee aad wada leedihiin. Marka laga reebo xogtooda guud sidoo kale waad arki kartaa goboladooda – hadaad adeegsato. Laakiin si lama filaan ah, laga bilaabo maalin ilaa maalinta ku xigta, ma sameyn kartid waxbadan oo kuwan ah, sawirna, ama waqtiga uu ku xirnaa, amase gobolka, waxba. Sabab?
Meelaha gaarka ah
Dejinta asturnaanta waxay kuu oggolaaneysaa inaad qariso sawirkaaga astaanta, macluumaadka, xaaladda, waqtiga ugu dambeeya. waqti iyo / ama aqri xaqiijinta. Sidoo kale, waxaa laga yaabaa inaadan arkin macluumaad gaar ah oo ku saabsan xiriir, iyadoo kuxiran meelahooda gaarka ah.
Haddii aadan arki karin markii ugu dambeysay. Waqtiga, sawirka guud, macluumaadka, ama xaaladda qof kale, wuxuu noqon karaa mid ka mid ah sababaha soo socda:
Xiriirka bedeshay dejinta asturnaantaada cidna “.
aad Waad beddeshay dejinta asturnaanta saacaddii ugu dambeysay. waqti in “Qofna“-waa geedi socod dib loogula noqon karo
Xiriirka cWaxaad u dejisay goobahaaga asturnaanta “Xidhiidhadayda” oo lambarkaagana kuma keydisid buugga xusuus qorka xiriirada taleefankaaga mobilada. Hubso in qofka aad la xiriirayso uu haysto nambarkaaga ku keydsan buugga xiriirka taleefankaaga si aad u arki karto macluumaadkooda asturnaanta.
Qofkaan adiga xannibaadda.
Waxaa jira a arrinta isku xirnaanta ku meel gaarka ah
Qofkaan malaha sawir muuqaal ah.
Maxaa la sameeyaa? Hagaag, qaar baa xallin kara, laakiin haddii tusaale ahaan ay xannibeen, markaa awood uma lihid inaad wax kale sameysid mooyee inaad sugto mooyee inuu kaa furo.